Peripheral Arterial Disease (ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါ) - Hello Sayarwon
Peripheral Arterial Disease (ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Peripheral Arterial Disease (ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါ)
Peripheral Arterial Disease (ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါ) ကဘာလဲ။
ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါသည် သွေးလည်ပတ်မှုတွင်ဖြစ်သောအဖြစ်များသည့်ပြသာနာဖြစ်ပြီး သွေးလွတ်ကြောများကျဉ်းခြင်းကြောင့် သင့်ခြေလက်များကိုသွေးမရောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါဖြစ်ပါက သင့်ခြေလက်-များသောအားဖြင့် ခြေ-တါင် သွေးလိုအပ်သလောက်မရတော့ပေ။ ထိုကြောင့်လက္ခဏာများဖြစ်စေပြီး သတိထားမိတတ်သောလက္ခဏာမှာ လမ်းလျောက်ချိန်ခြေထောက်နာခြင်း(ကလော့ဒီကေးရှင်း)ဖြစ်သည်။
ပင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါသည် သွေးကြောများတါင် အဆီစုပုံခြင်း(သွေးကြောကျဉ်းခြင်း၏လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအခြေအနေသည် သင့်နှလုံးဦးနှောက်ကိုသာမက ခြေထောက်ကိုသာသွေး၇ရှိမှုနည်းစေသည်။
Peripheral Arterial Disease (ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ်အဖြစ်များပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Peripheral Arterial Disease (ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ပင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါဖြစ်သောသူများတွင် ရောဂါသိပ်မပြင်းထန်ခြင်းသို့မဟုတ် လက္ခဏာမပြတတ်ပါ။ အချိုသူများတွင်လမ်းလျောက်လျင်နာခြင်း(ကလော့ဒီကေးရှင်း)ရှိတတ်သည်။
ကလော့ဒီကေးရှင်းလက္ခဏာများတွင်ခြေလက်များတွင် ကြွက်သားနာခြင်း သို့မဟုတ် ကြွက်တတ်ခြင်းရှိတတ်သည်။ လှုပ်ရှားသောအချိန် ဥပမာလမ်းလျောက်ခြင်းတွင်ဖြစ်ပြီး နားပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ကြာချိန်တွင်ပျောက်သွားတတ်သည်။ နာသောနေရာသည် ပိတ်သောသွေးလွတ်ကြောပေါ်မူတည်သည်။ ခြေသလုံးကြွက်သားတွင်အဖြစ်များသည်။
ကလော့ဒီနေးရှင်းပြင်းထန်မှုမျိုးစုံရှိသည်။ သိပ်မပြင်းထန်ခြင်းမှအားအင်ကုန်ခမ်းလောက်အောင်နာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ပြင်းသော ကလော့ဒီကေးရှင်းက လမ်းလျောက်ရန် သို့မဟုတ် အခြားအလုပ်လုပ်ရန်ခက်ခဲသည်အထိဖြစ်စေသည်။
သင့်တင်ပါး ပေါင် သို့မဟုတ် ခြေသလုံးကြွက်သားများ လှုပ်ရှားမှုလုပ်ချိန် ဥပမာ လမ်းလျောက်ခြင်း သို့မဟုတ်လှေကားတတ်ချိန်တွင်နာခြင်း(ကလော့ဒီကေးရှင်း)
ခြေထောက်ထုံခြင်း သို့မဟုတ် အားနည်းခြင်း
ခြေထောက်ခြေဖဝါးအေးခြင်း အဓိကအားဖြင့် အခြားဘက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက။
ခြေထောက်ရှိအမျှင်ကျွတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆံပင်ကြီးထွားနှုန်းနေးခြင်း
ပင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါပိုဆိုးလာပါက နားနေချိန်တွင်ပါနာလာခြင်း သို့မဟုတ် လှဲနေချိန်တွင်ပါနာလာတတ်သည်( သွေးမရခြင်းကြောင့်နာခြင်း) အအိပ်ပါပျက်နိုင်သည်။ ခုတင်ဒေါင့်မှ ခြေထောက်ကိုချထားခြင်း သင့်အခန်းအတွင်းလမ်းနည်းနည်းလျောက်ခြင်းကသက်သာစေနိုင်သည်။
ခြေထောက်နာခြင်း ထုံခြင်းနှင့်အခြားလက္ခဏာများရှိပါက ရိုးရိုးအသက်ကြီးရောဂါနှင့်မရောသင့်ပေ။ ဆရာဝန်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ရောဂါလက္ခဏာမရှိပါက အောက်ပါတို့ရှိပါက ရောဂါရှိမရှိစမ်းရန်လိုအပ်သည်။
အသက်၅၀ကျော် တွင် ဆီးချိုသို့မဟုတ် ဆေးလိပ်သောက်တတ်ခြင်း
အသက်ငါးဆယ်အောက်။ ဆီးချိုနှင့်အခြားသွေးကြောဆိုင်ရာအန္ဓါရာယ် ဥပမာ ဝခြင်းသွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်းတို့ရှိနေခြင်း။
Peripheral Arterial Disease (ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါသည် သွေးကြောကျဉ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သွေးကြောကျဉ်းခြင်းသည် အဆီ(အလွာ)များ သွေးကြောနံရံတွင်ဖြစ်လာပြီး သွေးစီးနှုန်းကိုနှေးစေသည်။
သွေးကြောကျဉ်းခြင်းသည် အဓိကနှလုံးကိုထိစေတတ်သော်လည်း ခန္ဓါကိုယ်တခုလုံးတွင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ခြေလက်ကိုထောက်ပေံ့သောသွေးကြောတွင်ဖြစ်ပါက ပင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါကိုဖြစ်စေတတ်သည်။
ရှားရှားပါးပါး သွေးကြောယောင်ခြင်း ခြေလက်ထိခိုက်မိခြင်း သင့်ကြွက်သားအရွတ်နေရာမမှန်ခြင်းသို့မဟုတ် ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိမိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Peripheral Arterial Disease (ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
မိသားစုမျိုးရိုးရှိခြင်း။ ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါ နှလုံးရောဂါ သို့မဟုတ် လေဖြတ်ခြင်း
Peripheral Arterial Disease (ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသက်ခြင်း။ ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါလက္ခဏာရှိပါက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသက်ခြင်း ဥပမာ သွေးကြောကျဉ်းသောနေရာအောက်တွင် သွေးခုန်နှုန်းမရခြင်း အားနည်းခြင်း၊ နားကြပ်ဖြင့်နားထောင်က အသံများကြားနေရခြင်း၊ သွေးမရောက်နိုင်သောနေရာတွင် အနာမကျက်ြခ်ငး နှင့် ဖြစ်သောခြေလက် တွင်သွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သည်။
ခြေလက် စံနှုန်း(အေဘီအိုင်) ရောဂါအတည်ပြုရန်အသုံးများဆုံး စမ်းသက်ချက်ဖြစ်သည်။ ခြေကျင်းဝတ်နှင့်လက်မောင်းရှိ သွေးပေါင်ချိန်ကိုတိုင်းပေးသည်။ သွေးပေါင်ချိန်ဖတ်လို့ရရန် သွေးပေါင်တိုင်းစက်နှင့် အထူးပြုလုပ်ထားသော အာထရာစောင်းဖြင့်သွေးစီးဆင်းမှုနှင့် သွေးပေါင်ချိန်ကိုတိုင်းသည်။
အထူးပြုလုပ်ထားသော အာထရာဆောင်းများ ဥပမာ ဒေါပလာ အာထရာစောင်း က သွေးထဲရှိသွေးစီးဆင်းမှုကိုလဲသိစေပြီး ပိတ်နေသောသွေးကြောများကိုလည်းသိစေနိုင်သည်။ ဆိုးဆေး(ပုံဖော်ပစ္စည်း)ကိုသွေးလွတ်ကြောအတွင်းသို့ထိုးပြီး သွေးစီးဆင်းမှုအရှိန်ကိုလဲသိစေသည်။ ထိုပစ္စည်းကိုပုံရိပ်ဖော်နည်းများ ဥပမာ ဓါတ်မှန်ရီုက်ခြင်း အန်အာအအေရိုက်ခြင်း နှင့် ကွန်ပြုတာဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့်လိုက်ကြည့်နိုင်သည်။ ပြွန်ဖြင့် သွေးကြောအားရိုက်ခြင်းသည် ခန္ဓကိုယ်အတွင်းသို့ပိုဝင်ရသည့်နည်းပညာ်ဖြစ်ပြီး ထိုပြွန်လေးကို ဖြစ်သောဘက်အခြမ်း၏ပေါင်ခြံသွေးကြောမထည့်ပြီး ဆိုးဆေးကိုထည့်လွတ်လိုက်သည်။ ဒီသွေးကြောပု့ရိပ်ဖော်ခြင်းဖြင့်ှရောဂါကိုတွေ့တစ်ခါတည်းကုသနိုင်သည်။ ကျဉ်းသောနေရာကိုရှာပြီးဆေးများပြီးချဲ့ပေးခြင်းဖြင့်သွေးလည်ပတ်မှုများစေသည်။
သွေးစစ်ဆေးခြင်း။ သွေးအနည်းကိုယူပြီးသွေးအတွင်းရှိ ကိုလက်စတောနှင့် ထွိုင်ဂလစ်စတွိုက်တို့ကိုနည်းစေသည်။ ဆီးချိုရှိမရှိစစ်နိုင်သည်။
Peripheral Arterial Disease (ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရောဂါလက္ခဏာများကိုစီမံခန့်ခွဲရန် ဥပမာ ခြေထောက်နာခြင်း ။ ထိုကြောင့်သင့်လှုပ်ရှားမှုများပြန်လည်လုပ်ဆောင်လာနိုင်မည်။
သွေးကြောကျဉ်းခြင်းကိုပိုမဆိုးဆေရန် ။ နှလုံးရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းနှင့်လေဖြတ်ခြင်းကိုလျော့ချပေးနီုင်သည်။
ထိုရည်ရွယ်ချက်များကိုလူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ရနိုင်သည်။ ဆေးလိပ်သောက်ပါက ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသည် နောက်ဆက်တွဲမဖြစ်အောင်တားဆီးပေးနိုင်သောအဓိကအရေးကြီးအချက်ဖြစ်သည်။
လူနေမှုပြောင်းလဲရုံနှင့်မလုံလောက်ပါ ဆရာဝန်မှဆေးပေးလိမ့်မည်။ သွေးမခဲစေရန် သွေးပေါင်ကျရန် သွေးတွင်းအဆီနည်းရန် နာခြင်းနှင့် အခြားလက္ခဏာသက်သာရန်ဆေးပေးလိမ့်မည်။
ကိုလက်စတောနည်းစေသောဆေး။ ထိုဆေး စတက်တင် က သင့် နှလုံးရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းနှင့်လေဖြတ်ခြင်းတို့မဖြစ်ရန်ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါတွင် ရည်ရွယ်ချက်မှာ မကောင်းသော အယ်ဒီအယ် ကိုလက်စတောကို ၁၀၀မီလီဂရမ် ပါ ဒက်စီလီတာ သို့မဟုတ် ၂.၆ မီလီမိုး ပါ လီတာ ထက်နည်းလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်တွင် နှလုံးရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းနှင့်လေဖြတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သောအခြား အကြောင်းများရှိပါက အဓိကအားဖြင့် ဆီးချို ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ဒီထက်နည်းအောင်ထားဖို့ရည်ရွယ်သည်။
သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်းအတွက်ဆေးပါ။ သွေးပေါင်ချိန်တက်နေပါက ချရန်ပေးလိမ့်မည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှ အပေါ်သွေး ကို၁၄၀ အောက်သွေးကို ၉၀ သို့မဟုတ် အောက်ထားလိုသည်။ ဆီးချိုရှိပါက၁၃၀ /၈၀ အောက်ထားလိုသည်။
သကြားဓါတ်အတွက်ဆေးများ။ ဆီးချိုရှိက သကြားဓါတ်ထိန်းရန်အရေးကြီးသည်။ ဆရာဝင်အား သင့်သကြားဓါတ်မည်မျှတွင်ထားသင့်သည် ထိုသို့ရအောင်မည်သို့လုပ်ရမည်တိုကိုမေးမြန်းပါ။
သွေးခဲခြင်းကိုကာကွယ်သောဆေးများ။ ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါသည် ခြေလက်များကိုသွေးစီးဆင်းမှုနည်းခြင်းကြောင့်ဖြတ်သောကြောင့်လိုအပ်နိုင်သည်။ အက်ပလင် ကုထုံးသို့မဟုတ် အခြားသောဆေးများ ဥပမာ ကလိုပီဒိုဂရယ်(ပလာဗစ်)ကိုပေးလိမ့်မည်။
လက္ခဏာသက်သာစေသောကုထုံး။ စီလိုစတာဇော(ပလီတယ်)သည်သင့်လက်ခြေများ၏သွေးစီးမှုကို သွေးပါးစေပြီး သွေးကြောချဲ့ပေးခြင်းဖြင့်ုမြားစေသည်။ လမ်းလျောက်ရင်နာခြင်း လက္ခဏာရှိသူများအတွက်ကောင်းသည်။ ထိုဆေးဆိုးကျိုးမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဝမ်းလျောခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ စီလိုစတာဇော နှင့်တူသောအခြားဆေးမှာ ပန်တိုဇီဖိုင်လင်း(ထရီတယ်)ဖြစ်သောလည်းထိရောက်မှုပိုနည်းသည်။ ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်တော့ရှားသည်။
အချီု့ကိစ္စများတွင် လမ်းလျောက်ပါကနာခြင်းမျိုးရှိပါက လိုအပ်နိုင်သည်။
ထိုလုပ်ဆောင်ချက်တွင် ပြွန်ကိုဖြစ်သောသွေးကြောထဲသို့ထည့်သည်။ ပြွန်ထုတ်ရှိ ဘောလုံးကိုဖောင်းခြင်းဖြင့် သွေးကြောကိုပြန်ပွင့်စေခြင်း ကပ်နေသောသွေးကြောနံရံများကိုဖောင်းလာစေခြင်းတို့လုပ်ပေးသည်။ ထိုကြောင့်သွေးလည်ပတ်မှုပြန်များစေသည်။ ဆရာဝန်မှ ဇကာကွက်ကဲ့သို့အရာကိုထည့်ထားခဲ့နိုင်သည်။ ထိုအရာက သွေးကြောကိုပွင့်နေရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ နှလုံးကုထုံးလုပ်တာနှင့်တူနိုင်သည်။
ခွဲစိတ်ခြင်း။ တည်ဆောက်ဖိုက်ဘာဖြင့်လုပ်ထားသော သင့်ခန္ဓါကိုယ်ရှိအခြားသွေးကြောကိုယူပြီး အစားထိုးမှုလုပ်လိမ့်မည်။ ထိုကြောင့်သွေးအားစီးဆင်းစေနိုင်သည်။
သွေးခဲဖျော်ကုထုံး။ သွေးခဲက ပိတ်နေပါက သွေးခဲဖျော်ဆေးကို သွေးကြောထဲသို့သွင်းပြီးသွေးကြောကိုဖွင့်ပေးသည်။
ဆေးကုသခြင်း ခွဲစိတ်ခြင်းများအပြင် လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်မှုများကိုလုပ်ခြင်းဖြင့်အ နာသက်သာနေချီန်လမ်းလျောက်နိုင်နှုန်းများစေသည်။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းက လက္ခဏာများကို နည်းလမ်းတော်တော်များများဖြင့်သက်သာစေနိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်သည်ကိုရှောင်ပါ။ သွေးကြောများကိုကျုံပြီးထိခိုက်စေခြင်း ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါဖြစ်လာစေခြင်း ပိုဆိုးလာစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေသည်။ သင်ဟာသင်ဖြတ်ရန်ခက်ခဲနေပါက ဆရာဝန်အကူအညီ ဆေးဝါးအပါအဝင် တောင်းခံပါ။ ထိုအရာသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါကောင်းမကောင်းကို လမ်းမည်မျှပြန်လျောက်လာနိုင်သည်နှင့်လည်းတိုင်းတာသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းသိပ်မလုပ်ခြင်းက သင့်ကြွက်သားများ အောက်စီဂျင်ကိုထိထိရောက်ရောက်မသုံးနိုင်စေပါ။ ထိုကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် အကြံကိုပေးလိမ့်မည်။ လမ်းလျောက်တာနာခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများကိုလုပ်ရန်ညွန်ကြားနိုင်သည်။
အာဟာရမျှတအောင်စားပါ။ ကျန်းမာစေသောအစာသည် ပြည့်ဝဆီနည်းပြီးသင့် သွေးပေါင်ချိန် ကိုလက်စတောများကိုထိန်းရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။
အချို့အဖျားကျစေသောဆေးများသောက်ခြင်းရှောင်ပါ။ ဆေးဆိုင်တွင်ရနိုင်သောထိုဆေးများတွင် ဆူဒိုအဖဒရင်း(အဗေး ကိုးနှင့် ဆိုင်းနပ် အဒိ ဒီ၊ ဆိုင်းနပ်နှင့်ခေါင်းကိုက်ြခ်ငး၊ ကလာတင်ဒီ ဆူဒီဖက် တိုင်လီနောအဖျား ဇိုင်းတက်ဒီ နှင့်အခြား)ပါတတ်သည်။ ထိုအရာက သွေးကြောကျဉ်းစေပြီး
ထို့အပြင် ခြေထောက်ကိုဂရုစိုက်ပါ။ ပြင်ပသွေးလွှတ်ကြောများတွင်ဖြစ်သောရောဂါ အဓိကအားဖြင့်ဆီးချိုပါရှိသူများတွင် ခြေထောက်ရှိအနာများကျက်ရန်ခက်ခဲတတ်သည်။ သွေးလည်ပတ်မှုနည်းခြင်းက အနာကျက်ရန်နှေးစေပြီး ပိုးဝင်စေနိုင်သည်။ အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါ။
ခြေထောက်ကိုနေ့တိုင်းဆေးပါ အပြည့်အဝအခြောက်ခံပြီး အစိုဓါတ်ထိန်းသောအရာများလိမ်းပေးပါ။ ထိုကြောင့်ခြေထောက်ကွဲခြင်းကိုသက်သာစေပြီးရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကိုလျော့ချပေးနိုင်သည်။ ခြေချောင်းကြားသို့မလိမ်းပါနှင့် မှိုပေါက်လာနိုင်သည်။
ခြေထောက်ယောင်ခြင်း အသားမာတက်ခြင်းတို့ရှိပါက ခြေထော်ကဆရာဝန်နဲ့ပြပါ။
4. Peripheral artery disease (PAD). http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/peripheral-artery-disease/home/ovc-20167418. Accessed 15 Jan 2017
5. What Is Peripheral Artery Disease? https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/pad. Accessed 15 Jan 2017
6. About Peripheral Artery Disease (PAD). http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/VascularHealth/PeripheralArteryDisease/About-Peripheral-Artery-Disease-PAD_UCM_301301_Article.jsp#.WHuIERt97IU. Accessed 15 Jan 2017